Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Jaliyadda Koonfur Afrika oo guul ku dhamaaday una dhanaayeen bulshada Somaliyeed eek u nool Gobolka Eastern cape
Shirweynihii Jaliyadda Koonfur Afrika oo guul ku dhamaaday una dhanaayeen bulshada Somaliyeed eek u nool Gobolka Eastern cape
Jaaliyada Ogadeneya ee dalka koonfur Afrika JOKA ayaa shirweyne si fiican loo soo agaasimay ku qabaty magalda Uitenhage ee xarunta u ah jaaliyada. shirkan oo ku soo hagaagay xili xaasaasi ah oo umada Ogadeniya ay aad indhaha ugu hayaan ayaa wuxuu furmay 2dii duhurnimo.
Waxaa shirka gudoominayey halgame Cabdi rahamaan Siciid oo ka mid ah masuuliyiinta jaaliyadda. Waxaaa lagu furay shirka aayada quraan ah iyo wacadi diini ah oo uu soo jeediyey Sheekh Cabdile Sheekh Cabdi isagoo aad ugu dheeraaday ku baraarujinta dadkii dhagaysanayay ka cabsiga Ilaahay iyo shuruudaha jihaadka in aan la iloobin. Wacadigaa diiniga ah kadib ayaa shirka oo aad u xiiso badanaa, hoolkana la soo buuxu dhaafiyey waxaa lagu soo dhaweyey gudoomiyaha jaaliyada JOKA suldaan Cabdi Askar oo war bixin dheer shirweynaha ka siiyay xaaladaha gudaha Ogadeniya iyo arimaha dibada iyo halganada ay wadaan jaaliyadaha. Wuxuu gudoomiyaha jaaliyadda ku dheerday halganka iyo meesha uu marayo iyo waxa looga baahan yahay dadweynaha taageera halganka. Wuxuu tibaaxay in maanta la gumeysto qayba badan oo ka mid ah Somaliya ilaa Ogadeniyaba oo loo baahanyahay in laga xoreyo gumaysiga Itobiya wuxuun shaagay in faragalinta Itobiya iyo damaca ay ka qabto Somalita uusan dhamaanayanin ilaa laga xoreeyo Ogadeniya marka hore.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyey cod baahiyaha Hohaanka jaaliyadda u qaabilsan arimaha bulshada oo si gaar ah uga hadalay in wada hadalka ay dadweynaha ay hadl hayaan iyo heshiis iyo wax la mid ah uu yahay mid ka soo baxay warbaahinta Dabaqoodhigu iyagoo meelaha ka sheega in Itoobiya iyo ONLF la wada hadal siinayo arintaasoo aan waxba ka jirin ujeedada gumaysiga uu ka leeyahayna ay tahay un jahawareerin. Sharaxaad dheer ayuu arintaa ka bixiyay waxaana ka mid ahaa hadaladiisa;
“Tan iyo intii ay soo galeen ciidamada Wayaanaha wadanka Ogaadeenya oy JWXO ay ka hawl galaysay gudaha dalka waxaa jiray dhawr goor oo ay dhaceen wax u eg wadahadalo keeni kara kara heshiis nabadeed.
1. 7 July 1991 waxaa ugu horayn dhacay heshiiskii koowaad oo ahaa in mudo laba sano iyo badh gudahood ah nabad lagu wada joogo ka dib cidii rabta inay ka madaxbanaanaato Itoobiyada kale ay ka bixi karto si nabad ah ka dib marka dadweynaha afti laga qaado. Heshiiskaa waxaa jabisay TPLF ka dib markii xiligii kala guurka gudihiisii ay ku diyaariyeen dastuur shan sano ah oo aan cid kale la ogayn oo xanbaarsan ifafaalo dagaal.
2. 15 feb 1994 waxaa jiray go’aan xubnihii barlamaan hoosaadkii Ogadenya ee xiligaa uu soo saaray oo sheegayay in sida waafaqsan charter-kii la’isku waafqay afti laga qaado dadweynaha Ogadenya.
3. 25-feb,1995 waxaa dhacay shirwaynaa magaalada qabridahar oy ku baaqeen in si nabad ah lagaga doodo arimaha dhex yaala ONLF iyo TPLF jabhadda ONLF iyadoo ka duulaysa dareenka shacabka laakiin og xaqiiqada TPLF ayay go,aansatay inay ka qaybgasho shirkaa hadii nabad lagu gaarayo. Waxaa ka soo qayb galay oo furay shirka Melez Zinawi laakiin wuxuu ku dhamaaday natiijo la’aan ka dib markii lagu fahmay khayaandii ay wateen Wayaanaha iyaga oo islahaa ONLF kama soo qayb gali doonaan shirka markaa kadibna ay eeda nadabgalyo xumada dusha u saari doonaan jabhada.
4. 1998kii waxaa dhacay wadahadalo dhawr wareeg ahaa oo ka dhacay dibada iyo magaalada Qabri dahar kuwaas oo socday mudo ku dhaw 4 bilood, waxayna ku soo gabagaboobeen shirqool ay ciidamad tigreegu u dhigeen ergadii jabhada ee shirkaa u matalaysay, waxaana lagu dilay n/hure Deeq Cabdi Raasin oo hawshan waday iyo Sheikh Bashiir iyo Maxamed Bood Timo Cade sanadkii 24 dicenber1998kii.
Wuxuu kaloo sheegay hogaanka jaaliyadda ee Arimaha Bulshada, inay fariimaha iyo shaqsiyaadka aan waafaqsanayn nidaamka ee mar walba ka imanaya Itoobiya uu badan yahay iyagoo sheegaya inay TPLF wax u ogoshahay, kuwaas oo ku mashquulsan dano shaqsiyadeed iyo u adeegida cadawga oo aan mudnayn in waqti lagu lumiyo. Intii ay socdeen waxayaalahan oo dhan waxaa hubaal ah inay marnaba soo marin Itoobiya wadadii lagu yiqiinay cid rabta inay wadahadal midho dhal ah gasho ,waxaase jabhada oo mar walba ilaalinaysa dareenka shacabka ay u badheedhaysay khatar. Mabaadiida wadahadalka ee jabhada waa mid marwalba u furan xukuumada Adisababa. Hadlka wuxuu ku soo koobay wada hadal dhab ah waa loo baahan yahay in dhibaatada ka jirta Geeska Afrika guud ahaan wax ka qaban karta, laakin waxa la dhoodhobay oo shirqool ah sidii kooxdii Ibraahim dheere marnaba ma aqbali karo.
Xubnaha jaaliyadda oo ka codsaday markii hore in uu sharaxaad ka siiyo arintaa ayaa si fiican ugu qancay.
waxaa kaloo shirka gadalo qiimi leh ka soo jeediyay odayaasha jaaliyadda oo ay ka mid ahaayeen Ahmed sowti iyo Cabdi amaadin, labaduna waxay ku baraarujiyeen dadkii meesha fadhiyay in la adkeeyo halganka ka socda Ogadeniya. Cabdi amadin ayaa isagu aqoon dheer u lehe taarikhada Itoobiya wuxuuna u sheegay dadka in an isbadal laheen Itoobiya.
Shirku ayaa karaar qaatay markii lagu soo dhaweeyey abwaan Khaddar Colaad oo ka tiriyay goobta 2ba gaby oo la kala dhaho Ogeysiis iyo Cilmi qarsoon. In shaa Alaah waxaad ka heli doontaan gabayadaa oo dhameys tiran warbaahnteena.
Ururka dhalinyarada ayaa iyaguna qayb fiican ka qaatay shirka oo ka hadalay goobta waxana ku hadalay magacooda Khadr Abshir iyo Cabdi qani wadaad yare.
Shirka ayaa kusoo dhamaday jawi aad u wanagasan iyo farxada aad u fiican waxaana lagu kala qaatay wada tashiyo iyo talbixino, waxaana lagu dardaar may in lagu daydo Koonfurta Suudan oo cadawga Itoobiya la iska celiyo.
Raali galin video-ga shirka dib ayaan ka soo galin doonaa.